မန်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာမှုကြောင့် အရောင်? - Yangon Media Group
မန်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာမှုကြောင့် အရောင်?
မန္တလေး မြို့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အရောင်းအဝယ် ဈေးနှုန်းများကျဆင်းလာမှုကြောင့် ယခင်လများကထက် သိသာစွာနည်းပါးလာနေပြီး အငှားဈေးနှုန်းများသာမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းများမှ သိရသည်။
”ငွေအရေးတကြီးပေါ်ချင်တဲ့သူတွေသာ မြေကွက်တွေကို ထုတ်ရောင်းနေကြတဲ့အခြေအနေပါ။ ဈေးကွက်အနေအထားအရ ဈေးလျှော့ပြီး ရောင်းနိုင်မှ အဝယ်ရှိပါတယ်။ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး တော့ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိလောက်ကို ကျဆင်းလာပေမယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြတော့ပါဘူး။ အရင်တုန်းက ဈေးကျဆင်းတဲ့အချိန်ဆို ဝယ်လိုအားတော်တော် လေးကောင်းပေမယ့် အခုတော့ဝယ်ပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ရောင်းမထွက်မှာကို စိုးရိမ်လာကြတာပါ။ လက်ရှိအရောင်းအဝယ်နည်းနည်း ဖြစ်နေတာကတော့ မြို့စွန်ပိုင်းနဲ့ မြို့တွင်းရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ကနေ ကျပ်သိန်း ၆ဝဝ အတွင်းပေါက်ဈေးရှိတဲ့ အဆင်သင့် နေထိုင်နိုင်တဲ့အိမ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းမှာဆိုရင် အချက်အချာကျတဲ့နေရာတိုင်းမှာ ဆိုင်ခန်းတစ်ခုငှားရမ်းဖို့က တော်တော် မလွယ်ကူသလို ဈေးတွေကလည်း တရိပ်ရိပ်မြင့်မားနေဆဲပါ”ဟု မန္တ လေးမြို့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးတော် ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူ ဦး ထွန်းမြင့်က နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
မန္တလေးအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ပြန်လည်ဦးမော့လာနိုင်ကြောင်း မျှော်မှန်းထားကြသော်လည်း ပေါက်ဈေးထက်ပိုမိုများနေခြင်းနှင့် အခွန်နှုန်းထားများပြားခြင်းတို့က ဈေးကွက်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေကြောင်း အိမ်ခြံမြေ အကျိုးတော်ဆောင်များက သုံးသပ်ကြပြီး လက်ရှိအရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေသည့်နေရာများနှင့်မြေဈေး နှုန်းများမှာ မြရည်နန္ဒာမြို့သစ်ပိုင်း၊ လမ်း ၅ဝ၊ ၅၁ လမ်း၊ ၅၂ လမ်းဘက်တွင် လမ်းမေးတင်မြေကွက် များမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၁ဝဝဝ ဝန်းကျင်၊ လမ်းကြားကွက်များမှာ ငွေကျပ်သိန်း ၄ဝဝ မှ ငွေကျပ် သိန်း ၇ဝဝ ကြားအထိ၊ တတ၊ ထထ၊ ဒဒ အပိုင်းတို့တွင် ငွေကျပ် သိန်း ၅ဝဝ ဝန်းကျင်၊ စက်မှုဇုန်အနီး လမ်းမေးတင်မြေကွက်များမှာ ငွေ ကျပ်သိန်း ၈ဝဝ မှ ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝဝဝ အထိ အသီးသီးရှိကြောင်း ဈေးကွက်မှသိရသည်။
ဦးပါမောက္ခကို ပုဒ်မ-၁၉ ဖြင့် ထောင် တစ်လချ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသူများ ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ ပြန်လာစေရန် ဆောင်ရွက်နေ
မသန်စွမ်းများ အကြမ်းဖက်ခံရပါက အွန်လိုင်းမှ တိုင်ကြားနိုင်ပြီ
ပညာရေးစနစ် ပြောင်းလဲနေမှုနှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိက စာသင်ကျောင်းများအနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများေ?